Top 10 kulan oo uu u Android Tablet e
Qaybta 1. Top 10 Chart ee Free Online Android Tablet Games
Qeybta 2: Top 10 Chart ee mushaarka Android Tablet Games
Qaybta 3. Shan Suuqyada u Games
Kiniiniyada Android heshay dareenka badan malaayiin macaamiisha ee ay crystal weyn screens cad, ciyaaraha iyo qaababka badan garaafyada, oo lama heli karo in telefoonnada gacanta ee Android. Haa, kuwaasoo ahaa looxyadii Android muuqda in ay qabaan screens weyn iyo ciyaartoyda ku raaxaysan karaan kulan ku interface weyn oo cad, halka fursadaha ay gacanta sidoo kale waa kuwo macquul ah. Waxaa jira boqolaal kulan oo kale oo laga heli karaa internetka oo dadka isticmaala ku soo bixi kartaa in uu cayaaro laakiin wax yar uun ay ka qiimo ciyaaro. Waxaan leenahay liiska ugu sareeya toban kiniin online kulan Android oo lacag la'aan ah, laga bilaabo tirada 10 ilaa 01.
Kulan xujo Tani ayaa si fiican u qiray in ay users ciyaarta Android oo aad la kulmi doonaan si ay u soo galaan si ay adduunka bahal weyn oo kale, baadhaan waxa Agtooda badan oo xalliyaan xujooyinka kala duwan. The kuwan raadkaygay dhawaaqa asalka sidoo kale waa wadnaha taabashada iyo aad doonaysid in aad ciyaarta jecel qaababka ay la yaab leh.
09. Game of War
Dagaalka ayaa hada dhow bilowday oo aad noqon kartaa qof dhibbane ah. Waxaad tahay sokeeya ee aad qalcaddii iyo foomka kartaa ciidan. Baadh ruuxaaga guuto oo ha u hesho gacanta oo dhan oo ka mid ah dhacdooyinka lama filaan ah oo ay la socdaan jidka aad si guul.
Real Racing 08. The 03
Kulankii tartanka la yaab leh waxaa ka mid ah kuwan raadkaygay tartanka ee dunida dhabta ah oo siman kuwan raadkaygay gaar Dubai ayaa sidoo kale, si ay kuu siiso fursad si jiidi giraangirood oo aad on tartanka fasalka kuwan raadkaygay adduunka.
07. Hearthstone Heroes ee Warcraft
Waa kulan kale oo qurux badan oo aad u baahan tahay inaad ururinta kaararka kala duwan. Tani waxay ku siinaysaa rating dheeraad ah oo aad ku dhisi kartaa miiska u gaar ah iyo sidoo kale ka heli kartaa gacanta dagaalka iyo yeedho u faaruqiyeen ah. Kulankaan ayaa waxa uu leeyahay tayo in ogolaanayaa ciyaartoy badan oo uu u ciyaaro ciyaarta hal mar iyaga oo u ogolaanaya hal ciyaaryahan u ciyaaro ka kiniin oo kale waqti isku mid ah ka isaga / iyada PC.
06. Candy burburi Game
Ciyaarta ayaa ku burburin nacnac ka socda si aad u hamuum la naca ay kaheli dhawaaqa asalka ayaa sidoo kale si fiican u horumarsan. Baad tegaysaa in ay kulankaan ku jeclahay. Hel kulankaan oo lacag la'aan ah 15 heerar badan oo ay ka dhigan tahay, haatan waxaad guud ee 1025 heerarka. Kanu miyaanu ahayn news weyn u nacnac caashaqi jiray?
05. Shimbiraha careysan
Kulankaan ayaa helay oo dhan ee muhimka ahaa iyo guul wakhtiga aad u yar oo ka mid ah ay sii daayo. Version ugu danbeeyay ee ciyaarta tani waxay u oggolaanaysaa dadka isticmaala si ay u helaan awood iyo doofaarradii kaxaystaan. Waxay u baahan yihiin in ay doofaarradii xoreeyaan qalcaddii iyadoo la kaashanayo awood shimbir. Si kastaba ha ahaatee, Stella careysan Shimbiribii Pop fursad u waafaqayaan naqas midabyo oo markaas iyaga la afuufo si loo gaaro bartilmaameedka siinayaa dadka isticmaala.
04. Gaboodfalkii: Ilaah naga mid ah
Warner Bros International Enterprises sii daayay kulan ay dagaal on this June 25, 2015 leh dhammaan tallaabooyinka la fahmi karo oo ah qaabab badan ciyaarta. User wuxuu u baahan yahay in la sameeyo koox ka kooban seddex ciyaaryahan oo ka dibna ay u dagaalami doonaa seddex ciyaaryahan oo kooxda ka mid ah soo horjeeda ee. Dhammaan muuqaalada ku jira qatar ah oo smartly loogu talagalay.
Waa kulan kale oo smart in la jecel inta badan isticmaala kiniinka. Kulankan oo aad u baahan tahay si ay u dhigma ee goobooyinka midabka la mid ah oo marka aad dhamaysid ku wareejisay, oo dhan goobooyinka kulan yihiin laguna saaro shaashada sida kaliya in ay dhacdo burburin nacnac. Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah go'aan qalad ah la sameeyo waxaa laga yaabaa in aad kulan aad u murugsan oo aad u. Dhibcaha la soo hor guuro iyo marxaladaha soo tago la dhabar jab ku ah goobooyinka iyo aad u badan.
02. dhintay ay kiciyaan 02
Dead Tiger 2 waa ciyaar Android u Alwaaxdii oo dhan naqshadeynta fiican iyo animations. Sida magacaba ka muuqata, waa kulan dilka in ciyaaryahanka uu yahay in ay dilaan zombies ee hab madadaalo ah. Version Latest ee ciyaarta ayaa lagu sii daayay July 07, 2015. Waxaad si ay u sahamiyaan hareeraha dunida iyo doorasho si ay ula 37 nooc oo ka mid ah qoryaha iyo hubka dilo zombies ah.
01. xun Land
Waa mid ka mid ah waxayaalaha cusub ee ciyaarta u fiican adduunka Android kulan. Waxaa jira in ka badan 100 marxaladaha kulankan oo ka buuxa muuqaalada cajiib ah. Waxaa la soo qiimeeyo 5/5 by AppSmile iyo 9.2 / 10 oo ay Multiplayer.it.
Qaybta 2. Top 10 Chart ee mushaarka Android Tablet Games
Ciyaarta ayaa waxay ku saabsan tahay gabadha oo lagu qabtay deegaanka oo la yaab leh halkaas oo aad u baahan tahay in ay u guuraan si xeeladaysan inuu ka baxo xaaladda. Sida laga soo xigtay Geesooleyaasha, "Waa ciyaar waajib-play ee 2014."
09. Gaadiidka Kambayuutarada
Kulankaan ayaa waxaa loogu talagalay caashaqi jiray gaadiidka. Waxaad dhamaan noocyada baabuurta iyo diyaaradaha si ay u fuliyaan hawlgallo. Riix xiriirka hoose oo isla markiiba hesho ciyaarta.
Kulankaan ayaa ka shaqeeya sida in TV iyo aad u iman doonaan inay dhexgalaan oo ula xiriiraan badan jilayaasha TV in ay sii guurto ciyaarta. Waa kulankii istiraatiiji ah oo aad u baahan tahay si ay u dhagaystaan ​​characters si ay u fahmaan theme ah. Gadaal waxaa ka fiican. Waxay u baahan tahay ugu yaraan 1 meel GB in aad tab iyo 1.2 GHz processor.
07. xilkeeda 02
Tani waxay la yaab leh ciyaarta ku siinayaa waqti imtixaan aad fikirka istiraatiiji ah. Waxaad u baahan tahay si loo badbaadiyo munaaraddii ka weerar ka baxsan iyo sidoo kale sameyn kartaa si aad u dagaalamaan ciidamada.
06. Baldur ee Gate
Price: $ 89-44.99
Ciyaarta ayaa si dhab ah u aheyd ciyaar PC ah in la keenay Alwaaxdii ee sanadka 2014, iyadoo dhammaan muuqaalada cajiib ah. Kontaroolada ayaa sidoo kale si wanaagsan u qalabaysan. Ciyaarta ayaa istiraatiiji ah waa adag tahay in waqti dheer inay ku dhameystaan ​​aad qaadan doonto.
05. warkii ka Borderlands ah
Laba saaxiibo aad u ogaato lacag caddaan ah halka xeebta oo ay u arkaan in iska leh iyaga. Laakiin, biimayn bilaabmin ka dib. Riix xiriirka hoos ku xusan iyo sahamin waxa run ahaantii dhacaya.
GP2 Riptide waxaa laga heli karaa badan ee tricks aad ka faa'iidaysan kartid inta on inaan orotonno Waxaana ku badood oo leh doomo aad tartanka.
03. mashearulxaraam Valley
Kulankaan ayaa daba noqonayaa amiirad aamusanaha badan kuwaas oo uu leeyahay doonayo si ay u sahamiyaan geometrics kasta oo naqshadaha inuu keeno wax cusub iyo xalal. Ciyaarta ayaa kaalinta 5/5 by "Touch Arcade" ee sanadkii 2015 oo ay tahay qurux badan.
02. Portal iyo Half Life 2
Tani waxay run ahaantii ahayd ciyaar PC ah in wareejiyay si kiniin by NVIDIA oo aad u baahan tahay gaashaan NVIDIA uu ugu ciyaari karo kulankaan.
Waxa uu ahaa kulankii No.01 Android sanadka. Kulankan aad la ciyaareyso sida ilmo oo ku jira raadinta walaashiis. Waxay ku jira xabsiga ee wuxuush creepy iyo jidka baadhi karo, galana wiilka adduunka jirey galay. Waxaa la abaal leh in ka badan 100 abaalmarinta sannadka 2015 iyo sidoo kale in ka badan 5000 oo dib u eegista. Waa kulan kaamil ah u ciyaaro ka soo jeeda fiican.
Waxaad hadda dejisan kartaa kulan Android meel kasta oo dunida ka isticmaalaya links soo socda. Websites Kuwani hanuuniyo aad si aad u hesho lacag la'aan ah oo ay bixisay kulan Android inaan ku baashaalo.
TOP 5 EMULATORS -PLAY ONLINE CLASSISC CIYAARAHA ONLINE
> Resource > Emulator > Top 10 kulan oo uu u Android Tablet